Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်း
1. ကချင်တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
2. ကယားတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
3. ကရင်တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
4. ချင်းတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
5. ဗမာတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
6. မွန်တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
7. ရခိုင်တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
8. ရှမ်းတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ
9. ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီ တို့ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
(ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြသော ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီကိုမူ ပြောဆိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မြန်မာစာပါမောက္ခ နိုင်ငံတော်ကော်စီဝင်(ရှမ်းပြည်နယ်)ဦးတင်အေးမှ ကျေးဇူး ဥပကာရပြုမှုဖြင့် သီးခြားဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့သည်။ သိုဖြစ်၍ တက္ကသိုလ်များရန်ကုန်တွင် စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆပ်ကော်မတီ (၉)ခုကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။)
* ၁၉၆၅ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ် ကော်မတီကို စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
* ၁၉၇၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးကော်လိပ်(ယခု တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်) ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဆပ်ကော်မတီကို စတင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
* ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်ကောလိပ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ် ကော်မတီကို စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
* ၁၉၇၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီကို စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
* ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆပ်ကော်မတီကို စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အခန်း(၂) အပိုဒ်(၂၁) အပိုဒ်ခွဲ(ခ)အရ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားတို့သည် မြို့နယ်ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များကို-
1. ၁၉၇၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၆)ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့ပြီး ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၁ခု နိုဝင်ဘာလ(၂၂)ရက်၊ ၁၉၈၅ ခု ဧပြီလ(၅)ရက်၊ ၁၉၈၅ ခု ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်များအတွင်းတွင် အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
2. ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဆီဆိုင်မြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်း ပြီး ၁၉၉၄ ခု မတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
3. ၁၉၇၄ ခု ဇန္န၀ါရီလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ် လွိုင်လင်မြို့နယ် ပအိုဝ်း စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
4. ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လွိုင်လင်မြို့နယ် ပင်လုံမြို့ ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
5. ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် အသင်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် စတင်စည်းရုံးခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၃ ခု ဒီဇင်ဘာလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ကလောမြို့နယ် အောင်ပန်းမြို့ ပအိုဝ်း စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
6. ၁၉၉၃ ခု ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ပင်ဖြစ်ကျေးရွာ၌ ရပ်ဆောက်မြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
7. ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ဟိုပုန်းမြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့သည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရေးနှင့် ကြီးကြပ် ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထား လျက်ရှိသည်။
8. ၁၉၉၄ ခု ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ညောင်ရွှေမြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
9. ၁၉၇၅ ခု ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း။ ထန်းတပင်မြို့နယ် ဇရပ်ကြီးဒေသ ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
10. ၁၉၉၃ ခု ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရေးနှင့် ကြီးကြပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းခွင့်အမှတ်(၁၀၇၄)ဖြင့်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မေလ(၉)ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
11. ၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လ(၂၅)ရက်နေ့တွင် စတင်စည်းရုံးလှုပ်ရှား၍ သြဂုတ်လ(၁) ရက်နေ့တွင် ရွာငံမြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
12. သထုံမြို့နယ် ပအိုဝ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကို ၁၉----
ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီကို တည်ထောင်ခြင်း။
၁၉၈၄ ခုနှစ်ကတည်းကပင် အသင်းအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ရရှိရေးအတွက် တောင်ကြီး မြို့ ပအိုဝ်း စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ တောင်ကြီးမြို့နယ်ကောင်စီထံသို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ကို မရရှိခဲ့ချေ။
၁၉၉၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(ဗဟို)ကော်မတီကို နာယက(၅)ဦး၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၂၇)ဦးတို့ဖြင့် ပအစယ(ဗဟို)ကို မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့၍ အောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်စွဲဖြင့် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို နောက် ထပ်တစ်ကြိမ် လျှောက်ထားခဲ့ပြန်သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၆ ခုနှစ် မတ်လ(၂၂) ရက်နေ့ ရောက်မှသာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရေးနှင့် ကြီးကြပ် ရေးဗဟို အဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းခွင့် အမှတ်(၁၇၉၅)ဖြင့် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(ဗဟို)ကို တရားဝင် စတင်ဖွဲ့စည်းခွင့် ရခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ခွိုပအိုဝ်း စာမျက်နှာ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။